192.168.8.1 - Admin Kupinda
IP kero 192.168.8.1 ip kero yakavanzika mukati meLocal Area Network, iwe chete ndiwe unogona kushandisa iyi IP kero uye haigone kushandiswa paInternet. Unogona kushandisa iyi IP kero 192.168.8.1 yekuvhura iyo router admin pani uye nekuita mashoma ekugadzirisa kune ayo default marongero. Mamwe mashoma ekushandurwa kwakadai anosanganisira kushandura password & zita rezita, maratidziro, kuisa firewall, & kumisikidza kwemidziyo.
Pane zvimwe zvinodikanwa zvatinofanira kutevedzera kuti tipinde muiyi IP kero & kugadzirisa zvinodiwa. Chinonyanya kukosha kuve munharaunda ye network ye router kana kungopinda. Chinomanikidza chikuru chine chekuita neiyi IP kero ndechekuti haiwanikwe paWWW uye saka inotimanikidza kuti tive munharaunda yetiweki ye router kuti tisvike pawebhu interface. Webhurawuza yedu inofanirwa kunge yakaoma (Google Chrome, Mozilla Firefox, nezvimwewo) sezvo iyi nzira inoda pop-up HTML5 rutsigiro.
Iwe unofanirwa kugadzirisa zvakare router yako kuti ishandiswe zvakanyanya. Kune mamwe marongero aunogona kumisikidza mune manejimendi ekutonga ye router. Iwe unogona kudzidza zvakawanda pawebhu interface.
zera rangu manje